Madaxwayne Xukuumaddaadu Yaaney Noqon Mid Xoorisa Oo Hadana Xayaabata | WAJAALE NEWS
Madaxwayne Xukuumaddaadu Yaaney Noqon Mid Xoorisa Oo Hadana Xayaabata
December 2, 2017 - Written by Reporter:
Oday baa la waydiiyey uducee inankaaga, markaasuu yidhi u ducayn maayo, habaarina maayo. Waayo, iga mutaysan. Siyaasiyiinta maanta iyo Muuseba uducayn mayno habaarina mayno. Waayo nagama mutaysan. Keliya waxaynu duceyn karnaa ama habaari karnaa markey ka dhabeeyaan wixii ay shacabka u ballan qaadeen wakhtigii olalaha doorashada.
Wakhtigii cod-bixinta waxa bulshada lagu maaweelinaayey ballan-qaad iyo in mid walba dhankisa wax walba wanaajin doono. Xukumadda madaxwayne Muuse soo dhisaayo weynu ka dhursugi shacabkuna waxay dhiiq-doba way ka dhuri. Aad shacabkuna waxay isha ugu hayaan maanta tayada iyo tabarta ay yeelan karto xukuumadda uu soo dhisi doono madaxwayne Muuse Biixi isaga iyo ku-xigeenkiisu.
Xukuumaddihii hore waynu ka war qabney sidey ahaayeen, ayax ayaad moodey. Bulshada Somaliland maantana wey ka ilbaxdey ballan-qaad been ah oo lagu maaweeliyo. Xukuumadduna waxay meteli doontaa shacabka shacabkuna waxay noqon doonaan kuwa ay xukuumaddu u shaqeyso sidoo kale iyaga uunbaa qiimeyn kara.
Qof walba oo muwaadin ah maanta wuu og yahay waxa uu ka sugaayo madaxwaynihiisa cusub iyo xukuumadda uu soo dhisaayo. Qof walba oo reer Somaliland ah maanta waxa uu maanta ku hayaa in uu helo dhammaan wixii loo ballan qaadey. Muuse wuxuu shacabka tiraba dhowr jeer ugu soo celiyey in waxa ugu badan ee uu ka shaqeyn doonno isaga iyo xukumaddiisu ay tahay sarreynta sharciga. Maanta madaxwayne 70% bulshada Somaliland waxay tirsanayaan caddaalad darro – xukuumadda maanta jirta iyo kuwii ka horeeyeyba waxay ahaayeen kuwo lagu hungoobey! Waayo; maanta madaxwayne lagag warami maayo in qandaraasyada dawladda ee masiiriga ah, lagu saxeexo aqal hoostii, in haddii aad hanka siyaasaddeed leedahay lagu yasaaqo, lagu bedelayo hunguri (shilimaad yar), in waddanku ku jiro xaalada tii ugu cusleyd oo ah; in bulshadu tahay mid ka rejo beeshay caddaaladii iyo sharcigii. Tusaale; dad badan ayaa manta jeelaasha ka buuxaan bilaa maxakamad la’aan. Tusaale, waxa wacan in lagu dhaqmo sharciga qofkana haddaan denbi lagu helin 24 gudahood in xoriyadiisii loo soo celin karo. Taasina ma dhacdo madaxwayne. Muwaadinka oo la xidhaayo xisaab la’aan maxay ka dhigan tahay. Xaalada caafimaad, sicir – barar, waxbarasho iyo biyo la’aan ee waddanku maraayo ciddi kaga warrami mayso.
Madaxwayne shacabkii ku doortey iyo kuwii aan ku dooranba waxay kaga fadhiyaan in aad fulliso wixii aad ballan-qaadey. Kagama baahna in aad raacdo wadadii uu qaadey saaxiibkaa Siilaanyo oo maanta xilkiisu gabaagbsi yahay. Isbedelku waa waxa qudha ee aad maanta ku hirgelin karto wixii aad umaddan u ballan-qaadey.
Madaxwayne fikirkaaga balaadhi oo haw fekerin sida xansharaadka oo hankaaga ha yarayn, haddii aad u fikirto sida xasharaadka, hadhaw ha canaanan naftaada marka aad aragto adiga oo fashilmey.
Waad ka warhaysaa madaxwayne in maanta habaaska laga tuma qabyaaladda, habdhaqanxumada iyo fasahaadka. Ninba ceesaantii ceel keen. Shacabku waxay kaa sugayaan sidii aad arrimahaasi wax uga qaban lahayd.
Ugu danbeyntiina waxaan madaxwayne kuu soo jeedin lahaa; in aad tayeyso shaqalaaha waddanka gaar ahaan dhanka xirfadda iyo aqoonta, musharka, Iyo in aad yareyso oo aad joojiso iska daba keenkan tiro belay, oggowna tayo ma keeni karaane iska bado keenkaasiye madaxwayne.